Nooca cusub ee galkeeda ilaaliya hogaanka leeyahay gacmo lahayn - China Shandong Chen lu
Action: ilaalinta shucaaca
U dhigma Lead :: 0.35mmpb
faahfaahinta :: L, M, S
HA08 darafkii galkeeda ilaaliya (hal wajiga oo aan gacmo)
Non-darafta shucaaca darafkii ilaalinta / model joog hogaanka: HA08
Waxaa inta badan loo isticmaalo ilaalinta X-ray, iyo user waxay dooran karaan taxane ilaalinta argument iyo caddaymaha kala duwan sida ay baahida ka. (Ilaalinta rays gamma waa guud ahaan 0.5 MMPB).
Cabbirka default of dharka tani waa size dhexdhexaad ah. Haddii ay jiraan xaalado kale, qiimaha is beddelid doonaa, farxin tashi gaar ah!
Radioprotection darafkii dhar anti-hogaanka cover caalamiga ah hogaanka ilaaliya cusub
Maalmahan, ultralight ugu, qalabka ilaalinta aalladda khafiif ah oo aalladda jilicsan ee dunida; Marka la barbar dhigo mid ah dhar hogaanka laga keeno ah oo miisaankiisu yahay qof qaraabo ah 25 ilaa 30 boqolkiiba waa la dhimi karaa.
- ray, dacwana difaaca leeyihiin guryaha difaaca fiican
Qaybinta hogaanka waa labis aad iyo isticmaalka caadiga ah ee hogaanka ma aha la dhimay. Bixi 0,35 / 0.5mmPb dhiganta hogaanka; Gasho u adkaysta, qalab si sahlan loo nadiif ah dusha si aad u ilaaliso maalgashi inta ugu badan,
The design qaab-dhismeedka cusub ee ray overskirt ilaaliya joog anti-hogaanka
Waxaa la sameeyey qalabka multi-lakabka, la design xirfadda aadanaha qaab-dhismeedka, taas oo ka dhigaysa in aad ku kalsoontahay.
habka saarka sax
sancada fiican, dhaafin, raagaya, ha aad isticmaasho inta kale xaqiijiyay;
Ray joog difaaca ee dharka difaaca
style waa asalka ah oo kala duwan waa complete
Rich in size, iyadoo aan loo eegayn aad tahay baruurta dhuuban, dheer oo gaaban, had iyo jeer ku haboon kuu, noqon sida in dawaarle kuu ah, Hababka darsin A, midabada hodan dooran karo, si buuxda u faafin shakhsiyadaada.
Previous: shuluggii radiation-caddayn Chen lu ayaa qaab difaaca hal-madaxyo simanna wanaagsan
Next: cap caag ilaaliya hogaanka cusub Chen lu ayaa laga beddeli karaa wax u dhigma kale
Shiinaha Sale Hot Shucaaca darafkii
Chinese X-Ray Protective darafkii
ilkaha Protective X-Ray darafkii
Hospitals Isticmaal Lead Rubber darafkii
Hospitals Isticmaal X-Ray darafkii
Import Waxyaabaha Protective darafkii
New Protective Short darafkii
New Split Protective galkeeda darafkii
Nooca New Of Protective darafkii
Ilaalinta x-ray darafkii hogaanka
Protective Medical darafkii
Darafkii Protective Iyadoo Import Waxyaabaha
Protective X-Ray darafkii
Lead Shucaaca darafkii
Jilicsan Protective darafkii
Jilicsan Split Protective darafkii
Split Protective darafkii Iyadoo Import Waxyaabaha
Super jilicsan Protective Short darafkii
Super jilicsan Split Protective darafkii
Lead X-Ray darafkii
X-Ray Protective Short darafkii
X-Ray Protective darafkii
The gashi anti-shucaaca waa jilicsan oo fartii ...
Anti-x Aga ray si toos ah / duwanaansho ilaalinta hogaanka ...
qasnaan Lead of qaybinta hogaanka aalladda jilicsan ...
Chen lu ee cusub semi-darafta hal-dhinac ah ...